Shirkii kasocday degmada Cadaado oo lasoo gabagabeeyay islamarkaana lagu gaaray in maamul midaysan looga dhawaaqo gobolada dhexe ee Soomaaliya – Radio Daljir
Shirkii kasocday degmada Cadaado oo lasoo gabagabeeyay islamarkaana lagu gaaray in maamul midaysan looga dhawaaqo gobolada dhexe ee Soomaaliya
Cadaado,Dec,17 -Magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud islamarkaana xarun u ah maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa maalintii shalay waxaa lagusoo gaba gabeeyey shir mudo todobaad ah halkaasi uga socdey qaar kamid ah maamulo loogaga dhawaaqay dalka dibadiisa.
Shirkani oo uu martigeliyey maamulka Ximan iyo Xeeb oo ka arimiya degmada Cadaado iyo deegaano hoostaga ayaa waxaa kasoo qaybgalay kudhowaad 10 wafdi oo kala metelayey maamulo lagaga dhawaaqay dalka dibadiisa,balse intooda badani aysan ka talin dhulka ay sheegtaan.
Cismaan Maxamed Cali ( Cismaan dheere ) oo ah madax arimaha siyaasada ee maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa idaacada Daljir uga waramay shirkaasi iyo waxyaabaha kasoo baxay, waxaana uu tilmaamay in shirkaasi la isku afgartay islamarkaana wufuudii ka qaybgashay ay isla qaateen samaynta hal maamul oo ay kumidoobaan dhamaan maamulada kajira gobolada dhexe ee Somaliya.
” Shirkaasi shir guul kusoo dhamaaday ayuu ahaa oo ay kasoo qayb galeen ilaa sagaal maamul goboleed,qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxaa kamid ahaa in meesha dadkii ay ku midoobeen hal maamul goboleed dhamaan badhtamaha Somaliya” ayuu yiri Cismaan Dheere oo dhanka siyaasada u qaabilsan maamulka Ximan iyo Xeeb.
Sidoo kale Cismaan Dheere waxaa uu sheegay in loo balamay qabsoomida wejiga labaad ee shirkan bisha 4’aad ee sanadka inagusoo aadan, kaasoo uu tilmaamay inuu ka dhici doono magaalada Cadaado.
Si kastaba ha ahaatee shirkani kusoo gaba gaboobey degmada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa soo dhamaada xili dhinyacyo badan oo gobolkaasi ka taliyaa ay qaadaceen shirkaasi, gaar ahaan Ahlusuna Waljameeca oo iyagu gebi ahaanba sheegay in shirkaasi uusan wax micno ah samayndoonin,mana muuqato qaab loo hirgelin karo qodobada shirkaasi kasoo baxay.